SARIN'NY FIOMPIANA ALIKA AMERIKANA BULLDOG, 1 - ALIKA
Sarin'ny fiompiana alika amerikana bulldog, 1
'Ity no Bulldog Amerikaniko Monte Carlo mandritra ny 6 herinandro, andro nahazoako azy. 9 volana izy izao ary milanja manodidina ny 80 lbs.! Ny fialambolin'i Monte dia ny fidirana amin'ny zava-drehetra, baoritra baoritra, fatoriana ary mazava ho azy ny fihinanana! Alokaloko aho na aiza na aiza alehako, tsy maintsy manaraka izy. Tena alika tsy mivadika sy be fitiavana tokoa. '
beagle miharo anglisy bulldog
Monte Carlo zanak'alika Amerikanina Bulldog amin'ny 6 herinandro
'Marilyn dia Bulldog Amerikanina 90 kilao tsara tarehy manana fo volamena. Avy amin'ny tsipika Johnson / hybrid izy. Nomena ny anarana hoe 'kintana vehivavy lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra' Marilyn Monroe, manana toetra lehibe kokoa noho ny fiainana izy izay mifanaraka tsara aminy. Marilyn no zavatra rehetra mety hilainao amin'ny Bulldog Amerikanina - mifanerasera tsara, miaro, mankatoa, tsara amin'ny ankizy sy ny biby rehetra !!! '
'Roxy ity. Izy dia vehivavy amerikana Bulldog 7 volana izay manodidina ny 45 lbs. Raha ny fahitako azy dia toa avy amin'ny 'Scott' na tsipika fampisehoana American Bulls izy. Malemy fanahy be izy ary mianatra haingana be. Izaho dia mino mafy ny filozofia mpitarika an'i Cesar Millan / pack ary mamaly tsara an'io i Roxy. Tsy mbola nanandratra ny feoko taminy aho mba hahatonga azy hankatò na hianatra na inona na inona antony tena sakafo sy fiderana. Roxy dia te hilalao sy mihazakazaka any ivelany, saingy somary tsy miasa izy ary maloto ao anaty trano. Roxy dia alika mahafinaritra ary sambatra aho manana azy. Manoro hevitra an'ity karazana ity aho ho an'izay afaka manome izany FANAZARAN-TENA ary tontolo voaorina dia mila ny tsara indrindra vitany. '
Buckshot the American Bulldog amin'ny 1 taona, milanja 130 pounds, matory miaraka amin'ny saka saka azy — sary natolotry ny Three Guns Kennel.
'Bobby Bryant sy Ajax ilay Bulldog Amerikanina 11 volana. Tiany ny mijanona eo akaikiko akaiky be. Tena mifanerasera amin'ny olona sy ny alika hafa. Tena mora ny nampiofana azy tamin'ny baiko maro. '
'Ity no voalohany amiko American Bulldog , Tena tiako izy sy Diesel! 9 herinandro izy tamin'ity sary ity ary efa milanja 25 lbs. !! Manana toetra mivoaka be izy. Izy dia efa mandray ny Dobermans efa lehibe ao amin'ny zaridainan'alika amin'ny ady-ady! Tsy mavitrika ao an-trano izy, fa tia milalao ivelany sy manodidina alika hafa . Halany ny banga, lol. Mahazo fanatanjahan-tena adiny 2 eo ho eo isan'andro izy (amin'ny 10 herinandro) fa matory mandritra ny alina sisa aorian'izany. Tiany ireo rahalahiny telo lahy, a Great Dane , Chihuahua , ary Poodle raha ny marina dia ny zaza ihany no hany tiany !! '
'Mihevitra aho fa canine voalanjalanja tokoa i Diesel. Izy dia afaka miala voly sy mihazakazaka rehefa mivoaka izahay, fa rehefa ao an-trano izahay dia afaka mandry sy miala sasatra ary mitsako kilalao . Amin'ity fahatanorany ity dia efa izy baiko fianarana . TIA Cesar Millan aho, ary tena manana ireo DVD aho. Novidiko ny leashes , sns izay entin'i Petco noforoniny. Ny fehin-kibo dia manampy amin'ny fitazonana ireo alika mandeha tsara . Notsapaiko ny sakafony, ary nentiko tany amin'ny valan-javaboary alika i Cesar Millan mba tsy hisotro ny rano iraisana. Mampiasa ny teknikan'izy ireo foana aho, ary izaho mampiofana ny tenako alohan'ny alika !! '
'Kyra the American Bulldog at 9 volana — mety somary natahotra aho ny hahazo Bulldog Amerikanina natahotra ahy kely izy ireo, saingy hatramin'ny andro nitantanako an'i Kyra dia namako akaiky indrindra izy. Afaka manadio latabatra kafe ao anatin'ny roa segondra ny rambony ary moka toa ny fiaran-dalamby mpitatitra entana izy, fa ny fijerin'ny fitiavana dia mazava be eo imasony ka ny mihomehy ihany no azonao atao. Izaho dia nanana alika kely ka hatramin'ny antonony foana, saingy tsy mino aho fa hisy karazany hafa ho ahy! '
Kyra the American Bulldog puppy amin'ny 9 herinandro
'Artie the American Bulldog amin'ny faha-3 taonany — tia olona izy, mandeha an-tongotra lavitra, matory, eo am-pofoanao, taolana mandondom-bolo ary misy tsoka akoho. Ny tena tsy tiany indrindra dia ny orana sy ny alika kely. Ny namany akaiky indrindra dia Labs mavo antsoina hoe Bruschi sy Molly. Ahoana no tsy hitiavanao an'io tarehy io ???? '
Tankin'i Boyd's / Gercken, Pennhip 0.44 — sary nahazoana alalana avy amin'ny Boyd's American Bulldogs
Sophie ilay Bulldog Amerikanina 15 volana (Old Southern White / Scott) no anarany voasoratra anarana.
Milly the American Bulldog, sary natolotr'i D'la Perla Kennel, Miami, FL
Dion's AB Dido, tokony ho 7 volana
mifankahazo ve ny alika lahy sy vavy
Ziggy an'i P.S.I. ary Johan P.S.I.
Hashko ilay Bulldog Amerikanina
Hailey the American Bulldog amin'ny maha alika azy amin'ny 8 herinandro
I Bud ity, alika kely telo volana.
Ity Bulldog amerikana tsara tarehy ity dia antsoina hoe Roxy.
Fampahalalana Amerikanina Bulldog
Sary Amerikanina Bulldog 4
Sary Amerikanina Bulldog 8
zanak'alika chihuahua mainty sy mainty
mainty sy fotsy mena orona pitbull
alika milanja 40 kilao
chihuahua sy min pin mix